Ungadibanisa njani amaqhina kunye neehempe ezinemigca? | Amadoda aQinisekileyo
Amadoda aQinisekileyo | | fashion, Imizila
Xa abazali bethu kwakufuneka banxibe ihempe kunye netayi, khange badibanise nehempe enemigca kunye netayi enepatheni, ngokuchaseneyo. Kodwa ngoku, kwisandla sabaqulunqi benguquko ngakumbi le yinto kwaye namhlanje Amadoda aQinisekileyo Siza kukunika isikhokelo sokungena kule ndlela intsha.
Ngaphambili, umnumzana wayengacingi ngokudibanisa imigca, izikwere, iiarabesque okanye amachaphaza e-polka kwimpahla efanayo. Kodwa kangangexesha elithile, ifashoni iye yavumela ngakumbi kwaye yeka umbono wento engalawulekiyo ukufezekisa indibaniselwano ekwaziyo ukuchukumisa iliso elifunekayo labasetyhini.
Ukuze ungaphazami, kukho imigaqo emibini esisiseko ekufuneka uyilandele xa udibanisa:
Eyokuqala ibonisa ukuba iipateni zahlulwe phakathi okanye zingene ngaphakathi (umzekelo, isuti elungelelanisiweyo, ihempe elula kunye nomtya onemigca ediagonal).
Okwesibini kuqinisekisa ukuba imibala kufuneka ihambelane, oko kukuthi, umbala wehempe uphindaphindiwe kwipateni yethayi.
Izitampu zinokudityaniswa kunye nezinye kuba nje ubukhulu beyahluka. Umgaqo wokudibanisa ihempe kunye neqhina kukuba iqhina kufuneka lihlale njalo libonakala ngaphezulu kwehempe kwaye ukuba ufuna ukuba ibe yenye indlela, iqhina kufuneka ligude.
Ungakufezekisa njani ukudityaniswa?
Ityala elidityanisiweyo elinokubakho iya kuba xa ihempe iblue imigca ngombala omhlophe, kwaye iqhina linemigca ebonakalisiweyo. Into ebalulekileyo yokuthintela ukugculelwa kukuba ububanzi bemigca bohlukile omnye komnye nakwindlela eyahlukileyo.
Into efanayo iyenzeka xa iihempe zinamacala aphindwe kabini. Nangona zingakhangeleki zintle kakhulu ngezibophelelo zesikwere, zihamba kakuhle ngeentambo ezinemigca nezicacileyo.
Eyona nto inokudibaniswa, ngaphandle kwamathandabuzo, ihempe ecacileyo kuba iyavuma nakuphi na ukubopha kwaye ibeka yonke ingqalelo kuyo. Ukuba ukhetha iqhina elicocekileyo, qiniseka ukuba ihlala ihleli ngaphezulu kwehempe ukuze inkangeleko ingalingani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Imizila » Ungadibanisa njani amaqhina kunye neehempe ezinemigca?
IHarmont kunye neBlaine ivula ivenkile eMadrid